एउटा कथा : कविता केशरी | Himal Times
Home सिर्जना एउटा कथा : कविता केशरी
लघुकथा : एउटा कथा
अाफ्ना घरका तगारामा मुसाको फोटो झुन्ड्याएर!
त्यही फोटो हेरिरहेको युवालाई बटुवाले सोध्यो, “भाइ, यो फोटो किन राख्नु भयो ?? यसको अर्थ के हो ?´´युवाले भन्यो , “अर्थ त थाहा भएन तर मेरा साथीले यसै गरे अनि मैले पनि गरेँ ।´´
बटुवा सबैतिर घुम्दै गयो।प्राय: सबै युवाका तगारामा मुसाको फोटो झुन्डिएको देख्यो। कारण के हो भनेर बटुवा ठूलो चिन्तामा पर्यो । अर्को दिन बटुवा युवाहरूको ठूलो भेलामा पुग्यो ; जहाँ मुसाको फोटो सबैले तगारामा राख्नु पर्ने विषमा प्रचार प्रसार भैरहेको थियो ।
बटुवा भिडबाट छिरेर वक्ताका अगाडि पुग्यो र भीँडलाई सोध्यो , “मुसाको फोटो तगारामा किन झुन्ड्याउनुको कारण के हो ? ´´ वक्ताले जवाफ दियो, “यत्रा दुनियाँ युवाले गरेको काम हामीले किन नगर्ने ? भनेर गर्यौँ । एक अापसमा उनीहरूबीच खुसुरफुसुर भयो , “साँची के कारण हो , कसैलाई थाहा छ ? सबैले एक स्वरमा भने , “कारण त थाहा भएन ।´´ (बिराटनगर)
Previous articleप्रकोप पोजेटिभ शिक्षण अस्पतालकी ५७ वर्षीया स्वास्थ्यकर्मीको निधन
Next articleनेपालमा पुनः लकडाउनको सम्भावना बढ्यो